Australia oo cunaqabateyn saartay 5-Jeneral oo Myanmar ah | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Australia oo cunaqabateyn saartay 5-Jeneral oo Myanmar ah
Australia oo cunaqabateyn saartay 5-Jeneral oo Myanmar ah
(SNTV)…Xukuumadda dalka Australia ayaa manta oo Talaado ah soo bandhigtay cunaqabateyn dhan ka ah 5-sarkaal oo Myanmar ah oo awood ku lahaa ciidamada Mileteriga,kuwaas oo lagu eedeeyay in ay daawanayeen xasuuqii loo geystay muslimiinta Rohingya.
Tallaabadaan ayaa daba joogta ama la mid ah cnaqabateynta ay horay u soo rogeen Mareykanka,Midowga Yurub,waxaana dalka Australia uu shaaca ka qaaday in la fariisinaayo hantida saraakiishaasi oo uu ku jiro Sareeye Gaas oo ahaa taliyihii hogaaminaayey xasuuqii cadowtinimo ee lagula kacay muslimiinta Rohingya .
Wasiirka Arimaha Dibadda Australia Marise Payne ayaa sheegay in saraakiishaasi oo kala ah – Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung, Than Oo, and Khin Maung Soe –ay masuul ka ahaayeen rabshadihii biniaadanimo ee loo geystay muslimiinta Barma.
Saraakiishaasi oo qaarkood ay iska casileen xilalkii ay haayeen ,haddana waxaa laga mamnuucay in ay u safraan dalka Australia .
Laga soo bilaabo sanadkii 2016-kii illaa 7-boqol oo kun oo Rohingya ah ayaa ka barakacay gobolka Rakhine oo dhaca K/Galbeed ee dalka Myanmar.
Previous articleMaxkamadda Ciidamada oo xukuntay Eedeysane dhaawac geystay.
Next articleWasiir ku-xigeenka Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha oo Shir uga qeyb galay Jabuuti